रुसी राष्ट्रपति पुटिनले कानून सुधारको घोषणागरेपछि प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा ! – Sagarmatha Online News Portal
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले कानून सुधारको घोषणागरेपछि प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा !
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई सुधारको प्रस्ताव गरेपछि रुसका प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेवले राजीनामा दिएका छन् । सुधार प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको सट्टा संसदलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू छनौट गर्ने अधिकार समावेश गरिएको छ ।